Inkampani iphrofayela - Tianjin Tanggu TWT Valve Co., Ltd
Air ukukhululwa valve
isilawuli Flow valve
TWT R & D amaqembu
TWT ine omuhle kakhulu abaphezulu lobuchwepheshe R & D amaqembu, ifakwe eziphambili imishini ukucacisa R & D isikhungo kanye ukuhlolwa isikhungo, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka-50 eminyakeni ubuchwepheshe anqwabelene, R & D kanye yokukhiqiza high quality, kwagezi nokuvikelwa kwemvelo imikhiqizo zobuchwepheshe R & D ejwayelekile TWT yenkampani. TWT ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa umkhiqizo unqobile kuna 20 patent kanye inqwaba imiklomelo kazwelonke, futhi kuyinto umsunguli Ministry of ukukhiqizwa umphini imishini umkhakha ejwayelekile.
TWT Quality Uhlelo Assurance
Simbheka imikhiqizo ukuphepha izinga okunokwethenjelwa njengoba umphefumulo Enterprise sika; e-China ne-valve umkhakha, singabeNkosi wokuqala ukuthola ISO 9001 izitifiketi ezikhishwe DNV: 2008 Quality System Certification; futhi sathola EU Pressure Izinsiza kusebenza Directive 97/23 / EC (CE isitifiketi) kanye ifektri isitifiketi by CCS.
TWT Core Value
Sihlala uhlanganyela ekuqeqesheni izisebenzi lobuchwepheshe ukuze aqinisekise ukuthi amakhasimende ungakwazi ukujabulela amasevisi best of the Industry. Inkonzo yethu ochwepheshe abakanye nakho ocebile ukufakwa, ilungise inkinga kanye nokugcinwa; futhi imikhiqizo nge izingxenye ezisele yokusungula. We ekuqinisekisa ukuthi singaxhumana sikunikele uphendule kungakapheli amahora angu-48 emuva kokuthola izikhalazo izinga noma lobuchwepheshe isicelo sokuxhaswa evela kumakhasimende ngasiphi endaweni emhlabeni. Ungakwazi ukholelwa kahle, lapha, ungakwazi ukujabulela okungakaze kube khona amasevisi eliphezulu.
"Ukholo, Quality Nokusungula" kukhona ukubaluleka core TWT Inkampani
Lolu hlelo ukubaluleka kuyisisekelo imibono yeNkampani kanye namasiko,
njengoba nje iyafana lapho liqala TWT e-1956.
Ikheli: Cha 1999, Jin Jiang Road, Tanggu, Tianjin 300451
I South Beijing ingxenye Tongzhou DN1 ...